Tag: Bakool | Sagal Radio Services
Ciidamada dowladda iyo kuwa Maamulka Koofur Galbeed oo la wareegay Tiyeeglow
Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koofur Galbeed ayaa dib ula wareegay degmada Tiyeeglow ee gobolka Bakool, halkaasoo maalmo ka hor ay qabsadeen Al-Shabaab, kaddib markii ay isaga baxeen ciidamadii Itoobiya ee ku sugnaa.
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo howl gallo la isugu furayo wadooyinka ka wada Gobolka Bakool
Ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ee ka mid ah howl galka AMISOM ayaa ka bilaabay deegaano ka tirsan Gobolka Bakool, howl gallo la isugu furay deegaanada go’doonsan, iyadoo ciidamada ay la kulmeen dagaalo iyo weeraro.
War Deg Deg ah:Ciidamada dowladda ee ku sugan Bakool oo toogasho ku dilay Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab
Wararka ka imaanaya Gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay dileen sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab, kadib howl gal ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada degmada Tiyeeglow.
Ciidamada XDS Oo La Wareegay Deegaanno Hoos taga Gobolka Bakool
Ciidamada Qalabka sida ee ku sugan gobolka Bakool ayaa xalay howlgallo ka sameeyay deegaanno kooxda aragagixisada Al Shabaab ay isku uruursanayeen, iyadoo qasaaro xoog leh u geystay malleeshiyaadka Al Shabaab.
Xaalada Gobalka bakool oo manta ah mid kacsan iyo Ciidanka oo ku sii jeeda qeeba kale oo isla gobalkaasi ah
Dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo xiisado dagaal ayaa wali laga dareemayaa qeybo ka mid ah Gobolka Bakool, halkaasoo saddexdii maalmood ee u dambeeyay ay ka dhacayeen dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda, kuwa Itoobiya iyo Xoogaga Shabaab.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Somalia ayaa la wareegay deegaanka Teed ee Gobalka Bakool
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda Somalia ayaa la wareegay deegaanka Teed oo 30-km u jira degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool, deegaankaas oo ay ka taliaysay Al-shabaab.